Wararka Maanta: Jimco, Aug 31, 2018-Mareykanka oo ku hanjabay in uu isaga baxayo ururka ganacsiga adduunka
Trump ayaa sheegay in ururuka ganacsiga adduunka ee WTO uu u baahan yahay in isbadal lagu sameeyo.
Waxaase uu qiray in Mareykanka uu sanadkii la soo dhaafay ku guuleystay dacwado la horgeeyay qeybta xallinta khilaafaadka ganacsiga ee ururkaasi.
Xukuumadda Washington ayaa horey u hakisay doorashada garsoorayaasha qeybta xallinta khilaafaadka ee WTO, arrintaasi oo mustaqbalka waxyeeleyn doonta awoodda garsoor ee ururka ganacsiga adduunka.
Weriye ka tirsan BBC ayaa sheegaya in ganacsiga adduunka uu cawaaqib xukumo la kulmi doono haddii Mareykanka uu isaga baxa WTO.
Trump ayaa tan iyo markii uu qabtay xilka madaxweynenimada ee dalkaasi Mareykanka ka baxay heshiisyo dhawr ah oo caalami ah, isaga oo ku eedeeyay in dhammaantood ay lid ku yihiin danaha Mareykanka.